हामीलाई निजामतिमा समायोजन गरियोस् – News Portal of Global Nepali
हामीलाई निजामतिमा समायोजन गरियोस्
16th January 2018 मा प्रकाशित
सारिका राई, अध्यक्ष, सामाजिक परिचालक कर्मचारी संघ
विगत नौ वर्षदेखि स्थानीय तहमा कार्यरत सामाजिक परिचालकहरू आन्दोलनमा उत्रेका छन् । एक सातासम्म उनीहरूले माइतघर मण्डलामा धर्ना दिने कार्यक्रम छ । त्यसपछि वार्तामा नबोलाए प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार घेराउ गर्ने भएका छन् । मंसिर १४ गते संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सामाजिक परिचालकहरूको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गर्दै सम्मानका साथ बिदा गर्ने निर्णय गरेपछि आफूहरूलाई सरकारी कर्मचारीमा समायोजन गरिनुपर्ने भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । को हुन् सामाजिक परिचालक ? उनीहरूको माग के हो ? भन्ने सन्दर्भमा आन्दोलन हाँकिरहेकी सारिका राईसँग गरिएको कुराकानी:
० सामाजिक परिचालक कर्मचारी संघ केका लागि आन्दोलनमा उत्रेको हो ?
– चार हजार सात सयजना सामाजिक परिचालकलाई उमेरको हद नलाग्ने गरी एकपटक योग्यताको आधारमा सरकारी कर्मचारीमा समायोजन गरियोस् भन्ने हाम्रो माग हो ।
० जनप्रतिनिधि आइसकेपछि तपाईंहरूको के काम ?
– जनप्रतिनिधि र हाम्रो काम फरक हो । जनप्रतिनिधिले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राखेर काम गर्नु हुन्छ । हामीले गरेको धेरै काम पेन्डिङमा छन् । कामको विधि नै बेग्लै हो ।
० सरकारले स–सम्मान तपाईंहरूलाई बिदाइ गर्दैछ त ?
– यसको हामी विरोध गर्दछौं, हिजो जनप्रतिनिधिविहीन भएका बेला हामीलाई काम लगाइयो । हामीलाई नौ वर्षसम्म काम लगाएर त्यत्तिकै बिदाइ गर्न मिल्छ र ? जनप्रतिनिधिको स्थान दिएर हामीलाई काम लगाइयो, अहिले हटाउँदा शोषण भएन ?
० पद ओगट्ने, काम नगर्नेलाई राज्यले पालिराख्नू त ?
– म सम्पूर्ण सामाजिक परिचालकको जिम्मा लिन सक्दिनँ । सम्भवतः पद ओगटेर काम नगर्ने परिचालक छैनन् । जति चर्चामा आयो, त्यो गलत पनि हुनसक्छ । त्यसकारण योग्यताका आधारमा सरकारी कर्मचारीमा समायोजन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
० उत्कृष्ट सामाजिक परिचालक कसरी छनोट गर्ने ?
– त्यो राज्यको जिम्मेवारी हो । हामी सम्पूर्ण सामाजिक परिचालक आफूलाई उत्कृष्ट मान्दछौं ।
० तपाईंहरूको सुझाव के छ ?
– स्थानीय तहमा अहिले ३६ हजार कर्मचारी आवश्यक छ । जसमा करार, अस्थायीलगायतका सबै कर्मचारीलाई समावेश गर्ने भनिएको छ । जब करार र अस्थायी कर्मचारीलाई समावेश गरिन्छ भने हामी सामाजिक परिचालकलाई किन करारको कर्मचारी मानिँदैन ? एउटा नियुक्तका आधारमा तपाईंहरू संस्थाको कर्मचारी हो, स्थानीय तहको कर्मचारी होइन भनिन्छ, यसको हामी विरोध र घोर भत्र्सना गर्दछौं । हामी विगत नौ वर्षदेखि काम गरिरहेका सामाजिक परिचालकहरूले राज्यकै काम गरेका हौं । हामीले पनि यही राज्यका लागि रगत पसिना बगाएका हौं ।
० तपाईंहरूको काम वडा सदस्यले गरिहाल्छन् नि ?
– त्यसैले हामी भन्दैछौं, दरबन्दी सिर्जना गरेर हामीलाई समावेश गरियोस् । जनप्रतिनिधिको काम हामीले पाउनुपर्छ भनेका छैनौं । स्थानीय तहमा यति धेरै कर्मचारी आवश्यक छ, हामी त्यही तहमा रहेर काम ग¥यौं, हामीमाथि राज्यले लगानी गरेको छ, भइरहेको जनशक्तिलाई राज्यले किन सदुपयोग नगर्ने ?
० नयाँ संरचनामा निर्माण भएकाले तपाईंहरूको औचित्य सकिएन र ?
– विगत नौ वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा हामीलाई काम गराउनुभो । हामीले दिलोज्यान दिएर काम गरेका छौं । त्यसकारण कुनै एउटा दरबन्दी मिलान गरेर स्थानीय तहमा हामीलाई समायोजन गरियोस् । राज्यलाई कर्मचारीको खाँचो छ, हामी त्यहीका अनुभवी कर्मचारी हौं । भएका कर्मचारीलाई प्रयोग नगरेर किन नयाँ कर्मचारी मागिँदैछ ?
० उमेरको हदबन्दी नलगाई भनेको के हो ?
– विगत नौ वर्षदेखि काम गरेका सामाजिक परिचालकहरू मानिलिनुस् ३० वर्षदेखि सेवामा लाग्नुभयो । सचिव जान नसक्ने स्थानमा काम लगाइयो । ३६ वर्षमा लोकसेवा दिन पाइँदैन । ५०–५५ वर्षसम्म त सरकारको जागिर खान पाइन्छ नि ।
० स्थानीय तहको निर्वाचनपछि तपाईंहरूलाई के काम दिइएको थियो ?
– सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण र भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा हामी काममा जुटिरहेका थियौं । सरकारले पुस १६ गतेदेखि अवकाश भनेर दिएको पत्रमा स्थानीय तह स्वायत्त भएको हुनाले प्रत्येक गाउँ र नगरपालिकाले आ–आफ्नो सामाजिक परिचालकलाई कार्य मूल्यांकन सम्पादन गरी समावेश गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । जसले गर्दा राजनीतिक चलखेल धेरै भयो । कतिपय नगरपालिकामा सामाजिक परिचालिका समावेश भए, कतिपय स्थानमा फ्याँकिए ।
० आन्दोलन चाहिँ केका लागि ?
– जब मन्त्रालयले त्यस्तो परिपत्र गर्छ भने उहाँले नै छुटाइदिनुप¥यो– को उत्कृष्ट सामाजिक परिचालक ?
० उत्कृष्ट छुटाउने विधि र प्रक्रिया होला नि ?
– यति धेरै जनशक्ति बेरोजगार बसिराख्ने ? यो राज्यको अवधारणा ठीक भएन । यसको विधि र प्रक्रिया कहिले सुरु हुन्छ ? यदि हामी निष्क्रिय रह्यौं भने राज्यले हाम्रो माग सुनिश्चित गर्छ ?
० मन्त्रालयको परिपत्र आउनेवित्तिकै आन्दोलन सुरु गर्नुपर्छ त ?
– हो, हामीलाई १४ गते परिपत्र आयो, १५ गतेदेखि हामी आन्दोलनमा गयौं । हामीले राज्यलाई पटक पटक अनुरोध ग¥यौं । पाँचवटा राष्ट्रिय राजनीतिक दलका अध्यक्षसँग भेट गरेर हाम्रो समस्या दर्शायौं । हामी सम्बन्धित निकायमा पुग्यौं ।
० सरोकारवाला निकायसँग संवाद गर्नुभएन ?
– सरोकारवाला निकाय मौन बसेको छ । स्थानीय विकासमन्त्रीलाई हामीले ज्ञापनपत्र बुझायौं । उहाँले वार्ताको माध्यमबाट हामी समस्या समाधान गर्छौ भन्नुभयो । तर हामीलाई अहिलेसम्म बेवास्ता गरियो ।
० सामाजिक परिचालन कसरी हुन्थ्यो ?
– राज्यले बजेट विनियोजन गरेको हुन्छ, त्यो सरोकारवालासमक्ष पु¥याउने, परिषद्को लक्षित बजेट जनतासमक्ष सामाजिक परिचालकले पु¥याउँथ्यो । दुई दिनसम्म बास बसेर लक्षित वर्गसम्म पुगेर जनतालाई जानकारी गराउने, महिलाका लागि विनियोजन भएको १० प्रतिशत बजेट, जेष्ठ नागरिक, असशक्तका लागि १५ प्रतिशत बजेट छ, कृषि तथा पशुका लागि छ । यो अवगत कसले गराउने हो ?
० यो काम गत वडा सदस्यको हो ?
– वडा सदस्यहरू आउनुभयो ठीक छ, तर यो काम उहाँहरू एक्लैले गर्न सक्नु हुन्न । हामी तालिम प्राप्त छौं, उहाँहरूलाई कर्मचारी चाहिएको छ, राज्यले दरबन्दी सिर्जना गरेर हामीलाई मिलान गरोस् ।
० राज्यले तपाईंहरूको कुरा सुनेन भने के गर्नुहुन्छ ?
– हाम्रो कुरा सुनवाइ हुँदैन भन्ने कुरा हामी सोच्दै सोच्दैनौं । हाम्रो माग सुनवाइ हुन्छ, हामी पनि नेपाली जनता हौं, राज्यले हामीविरुद्ध कठोर निर्णय गर्छ भन्ने हामी कल्पना पनि गर्दैछौं ।